Habaynta Nolosha Archives - Daryeel Magazine
1. Subax kasta markuu waaga baryo Fursad ayaa laguu soo bandhigaa. Adigay ku jirtaa inaad ka faa’iideysato ama lumiso. Inaad wixi shalay kaa qaldamay ku saxdo ama ku sii qaribto 2. Goortii fursad Albaabkaada soo garaacdo ha u oggolaan in Cabsi dib kuu celiso. Ka fur Albaabka oo qabso fursadaa sababtoo ah fursado isku mid ah laba jeer ma soo …
Wuxuu igu yiri noloshan waan nacay waxba kuma heysto, jaceyl ma heysto, cabsidaa igu badan, xanaaqa sanka ayuu iga saaran yahay, dhibaato weyn ayaa i heysata wuxuuna ii muujiyay in uu ka doorbidi lahaa in uuba iska dhinto. Markaa ayaan ku iri walaal aduunyadan waa wax gaaban ee isaga noolow. jaceylka waa wax yar ee soo jiido, xanaaqa waa samir …
Akhri Oo Ka Faa’iideyso Casharadan
1- Ugu yeer dadka Alle ka cabsiga isla markaana dadka wax ugu sheeg si wanaaga iyo xikmadi ku jirto. 2- U noolow nolosha marmarsiinyo la’aan. 3- U jeclow aadamaha si aan shalayto ama qoomamo lahayn. 4- Ogow goortii noloshu ku siiso Boqol sababood oo kaa oohin kara, tus nolosha inaad heysato Kun sababood oo aad la dhoolacadeyso. 5- U wajah …
Cafiska Waa Qeyb kamid ah Caafimaadka Nolosha Aadanaha
Cafisku waa shey qaali ah waa wax loo baahan yahay in laysa saamaxo oo lays cafiyo waayo cafiska waa qeyb kamid ah nolosha baniaadanka. Cafiskana wuxuu lug ku lee yahay jaceylka waayo qof aan waligii wax saamixin ama cafin wax ma jeclaado.haddaad saamaxdo dadka waxay ahaanayaan kuwo ku leh oo mar walba kugu tashada. Soomaaalida waxay tiraadaa JACEYLKU WUXUU KU …
Waxaad noqoneysaa wixi aad mar kasta ka fakirto, si joogta ahna u sameyso maalin kasta. Madaxweyne iyo Boqor kasta Beri bay ahaayeen ilma yar oo oohin badan. Dhismaha Quruxda badan aad arkeyso mar buu ahaa Naqshad warqad ku sawiran. Shirkadaa Ganacsiga weyn dhawr sano ka hor waxay ahayd mid aan jirin. Laacibkaa ugu wanaagsan Aduunka xilli buu ahaa wiil yar …
10 Talaabo oo sare u qaadaysa Kalsoonida qofka
1. Tuko Salaada Subax. Marki ugu horeysa aad hurdada ka toosto Ku Shugri Allihi ku siiyay fursada labaad ee Nolosha, ka dib Tuko Salaada Subax waqtigeeda, tani waxay ku siinaysaa Kalsoonida ugu sareysa & in aan maalintaa si fiican kuugu bilaabato 2. Jimicso. Jimicsiga wuxuu sare u qaadaa qaab-dhismeedka jirka, wuxuu qofka siiyaa firfircooni. Waa hab fudud waxtarna u leh inuu …
Talo Iyo Xasuusin
Webiga ma qarqin Nabi Muuse CS isagoo ah saqiir kuna sugan xaalad uu aad u tabar daran yahay. Hadana Webiga wuxuu qarqiyay Fircoon isagoo ku sugan xilligi uu ugu awooda badnaa! Kibir dartiisna uu sheegtay in uu Bini’aadan oo dhan ka sareeyo!! Haddaba, qof kasta oo Alle ku xiran, daciifnimadiisu ma ahaaneyso mid dhibaato u geysata. Qof kasta oo aan …
Wax akhrisku wuxuu qofka u saamaxaa in uu ka fikiro qorshihiisa, hamiyiisa dhaw iyo ka fog, sidoo kale wuxuu qofka u horseedaa in uu siyaabo kala duwan ugu baaraandego mushkiladaha soo foodsaara. Sababta ayaa ah maskaxdii oo balaadhatay, ka dibna dhinacyo badan ayey wax ka eegaysaa. Wuxuu sidoo kale dhisaa wax akhrisku luuqada iyo erayda qofku ku hadlayo. Angel Carter ayaa …
Toddobo Xaqiiqo oo Qaraar oo Markii aad Ogaato Miigganaan kuu Kordhin Doonta!!
Haddii aad baadigoob ugu jirtay talooyin dabacsan oo nolosha ku saabsan, kuwani saas ma aha. Talooyinkaan 7-da ah ee qaraar waxaa laga yaabaa in maqalkooda ay dhegtu u bogi wayso, balse waxaa la hubaa in ay kugu caawin doonaan habeynta noloshaada. 1) Qof ay shaqadiisu tahay in uu adiga ku toosiyo ma jirto, naftaada adigu toosi Ma waxaa …
Ha Walwalin 1. Welwelku waa waqti lumis. Waxba ma badali karo. Wuxuu wareeriyaa maskaxdaada, wuxuuna kaa xadaa farxadaada 2. Ha ka walwalin guuldaro iyo fashil ku soo gaaray, Ku farax in aad cashar baratay, waaya aragnimo heshay, ogsoonow in qof kasta oo guulaystay uu soo maray guuldarooyin badan 3. Ha ka welwelin in Alle ducadaada kuu aqbali waayay, xaqiiqdii Alle …
Maxaad u soo Taagnayd?
Maxaad u soo Taagnayd? Been badan iyo Balan furyo ayaad la kulantay, waa ka soo gudubtay Safaro halis ah ayaad gashay, waad ka soo gudubtay Dabin & shirqool ayaa laguu dhigay, waad ka soo gudubtay Aad baad u xanuunsatay, waad ka soo caafimaaday Qalbi-jab ayaa kugu dhacay, waad ka soo gudubtay Faqri iyo jeeb marnaan ayaa ku helay, waad ka …
Sidee dadka qaarkood ay awoodi karaan in ay haybadda ay yeeshaan oo dadkana ay ku qasbaan inay ixtiraamaan? dadka qaarkood waxay kugu abuurayaan jaceyl faro badan iyo kalgacal faro badan markaad hadalkooda maqashid iyo codkooda ama wajigooda aad aragtid. Dadka qaarkood ilaahay Haybad faro badan buu siiyaa iyagoo haddana lacag aanan lahayn mansab weyna aanan lahayn, shaqo wacana aanan ka …
Isbeddel ayaynu maqalnaa se marka aynu hoos ugu sii dhaadhacno isma weydiino muxuu yahay isbeddelku? Waxa u baahan in aan iska beddelaa waa maxay? Ma dharka iyo hu’ga aan xidhanahay baa? Ma cuntada iyo ceeshkaan cuno ayay tahay in aan iska beddelo? Muxuu yahay waxa ay tahay in aan iska beddelo si aan isbeddel ula yimaado? Isbeddel waxa uu qofku …
Kusoo Dhawaada barnaamijka Xasuus qor dhakhtar ilkood oo ay soo diyaariso Dhaktar Hibaaq Buubaal. Xalqadaan waxay gaar u tahay qof kasta oo guul iyo horumar noloshiisa gaadhay oo hadalka dadku uu dhibay, bini-aadam kasta oo nolosha guul doonaya inuu gaadho oo dagaal kula jira dadka hadalkooda marna u jawaabaya marna ka aamusaya. Xalqadaan waxay gaar u tahay qof kasta oo …
Waxaan halkaan ka salaamaya maamulka Daryeelmagazine iyo akhristayaasha Soomaaliyeed meelkasta oo ay dunida ka joogaan.Dunida aan joogno waa duni xikmad badan ruuxana xikmadu meel walba ayeey uga imaan kartaa balse aadmiga oo dhan ma wada noqdaan kuwa xikmada fahma ama ka faa’ideysta.Maalinkasta waxay leedahay waji iyo arin gooni ah. Maalin waa roob maalin waa qorax maalin waa dabeyl maalin waa …